အနန ္တအမည်ဖြင့် 4G+ ဒေတာအော်ပရေတာသစ်တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာ
အနန ္တ (ananda) အမည်ဖြင့် 4G+ ဒေတာအော်ပရေတာသစ်တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာပြီး ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ယခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွင်း စတင်သွားမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံက ဒစ်ဂျစ်တယ်သုံးစွဲသူတွေကို သူတို့လိုချင်နေတဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံမျိုးနဲ့ အဆုံးမရှိတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ananda (အနန္တ).
စတုတ္ထမြောက် တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာ၏ ကွန်ယက် စတင်ဖွင့်လှစ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာဖြစ်လာမည့် Mytel ၏ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုသော အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ Mytel ၏ ပထမဦးဆုံး ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်အနေဖြင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဗီယမ်နမ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးထံ ပထမဦးဆုံး.
ရိုဟင်ဂျာအကျပ်အတည်းအား လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုက်တွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် တိုက်တွန်းသွားခဲ့သည်။
ဘီဘီစီ ခေါင်းစဉ်သတင်းတွေကို Frontier Myanmar ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖတ်နိုင်ပြီ
ဘီဘီစီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအဖြစ် ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည့် bbc.com/Burmese က တင်ဆက်နေသော နောက်ဆုံးရသတင်းများ၏ သတင်းခေါင်းစဉ်များကို Frontier Myanmar ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ မြန်မာပိုင်း ပင်မစာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့နှစ်ခုအား မတရားအသင်းမှ ပယ်ဖျက်၊ အကြမ်းဖက်မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာ
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာနှစ်ခုဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ဖယ်ရှားပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်မှ ဒေါ်လာ ၆၄ သန်းတန် ရထားတွဲများ ဝယ်ယူမည်
မြန်မာ့မီးရထား အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံချက်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၄ သန်းတန် ရထားတွဲများကို ဂျပန်ကုမ္ပဏီများထံမှ ဝယ်ယူသွားမည်ဟု ဂျပန် NHK သတင်းဌာနက ရေးသားထားသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဦးဆောင် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် မာရူဘီနီနှင့် ရထားထုတ်လုပ်သူ Niigata Transys တို့က ရထားတွဲ ၂၄ တွဲ ပေးပို့သွားမည်ဟု.
အင်းဒင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို စစ်ဆေးနေကြောင်း ပြည်ထဲရေးက အတည်ပြု
မတရားအသင်း ဆက်နွယ်မှုနဲ့ မန္တလေးမှာ ထောင်ချခံထားရတဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ- ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် TNLA တပ်သားအချို့အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- စတိဗ် တစ်ခ်နာ
နန်းဖာလုံဈေး မီးလောင်မှုကြောင့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် ပိတ်ထား
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် နန်းဖာလုံဈေးတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့ညက မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့်အတွက် နယ်စပ်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့တွင် ပိတ်ထားလိုက်ကြောင်း အိန္ဒိယသတင်းစာတစ်စောင်က ရေးသားထားသည်။ ည ၉ နာရီခန့်တွင် ဈေးအတွင်း မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မိုရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ကိုးကားပြီး အိန္ဒိယ Business Standard သတင်းစာက.